Fil d'actualités du 17/01/2018
17/01/2018 - 14:15 : FAMPIANARANA: Niverina nampianatra nanomboka androany ireo mpampianatra any amin’ny faritr’i SAVA mivondrona ao amin’ny Sempama raha ny tapaka tamin’ny fivoriana nataon’izy ireo omaly. Nampanatena hamaha ny olana ihany koa ny ministry ny fanabeazam pirenena.
17/01/2018 - 14:00 : BAOLINA KITRA: Hametrapetraka ny politikany mba hahatonga an'i Madagasikara hitondra avo ny reharehan'ny firenena amin'ny CAN 2019 ihany koa i Dupuis Nicolas amin’izao fandalovany eto izao.
17/01/2018 - 13:45 : SEKRIMA: manao antso avo amin’ny fitondrana foibe mba hijery akaiky ny olan’ ireo mpiasa ao amin’ny Classic Knit wear andraharo izay niteraka fitokonana nandritry ny andro maromaro ny teo anivon’ny Sekrima na syndicat-n’ny Kristianina Malagasy.
17/01/2018 - 13:30 : JIRAMA: Tokony hanao fanambarana any amin’ny jirama ireo olona mahatsikaritra zavatra hafahafa, fa tsy handefitra amin’ireo izay tratra mangalatra herin’aratra.
17/01/2018 - 13:00 : MORONDAVA: Tovovavy iray 17 taona no nisy saika aka an-keriny omaly, ka rehefa nanohitra ity Vehivavy dia vaky nandositra ireo lehilahy 3, ary mandeha ny fikarohana amin’izao.
17/01/2018 - 12:30 : AMBODIVONDAVA: Tovolahy iray maty an-drano teny amin'ny fefiloha hiampita ho eny Antsofonondry io maraina io
Archive du 20170819
Foloalindahy Malagasy Ataon-dRajao kilalao politika
Lasa fihomehezana tany Antsiranana sy fanalana azy tao anaty tambajotran-tserasera facebook manerana ny nosy omaly hariva ny fahitana ny filoha Hery Rajaonarimampianina nanao “tenue de combat” tonga tany Antsiranana.
Raveloson Constant “Narefarefan’ny olony tanaty loto ny Filoham-pirenena”
Noroahin'ny tandapan'ny Prezidansan'ny Repoblika faha-4 tamin'ny fandraisam-bahiny lehibe nilasiany tao Antsiranana ny Prezidà farany tamin'ny Repoblika faha-3.
DFP manerana ny nosy Tsy hanaiky hoverezin-jo intsony
Nanao tatitra ny fivoriana nataon’izy ireo tany Fianarantsoa farany teo tetsy amin’ny AKFM Andravoahangy ry zareo avy eo anivon’ny
Lisi-pifidianana Misy kajy maloto avo lenta ?
Mahatalanjona ity lisi-pifidianana hiandrasana manampahaizana avy any ivelany afaka volana vitsivitsy ity, hoy ny CRAM (Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar).
Mba ampiasao amin’ny tsara e !
Miarahaba ry Jean a ! Hafa mihitsy indray ity revy sy hevi-baovao hisintonana ny sain’ny olona efa tofoka sy leon’ny diska gaoka ity a !
Guy Rivo Randrianarisoa Ampijabahan’ny namany ny filoha
Nitondra fanazavana momba ny zava-niseho ny alakamisy alina, nandroahana an’i Marc Ravalomanana mianakavy tao amin’ny Grand Hôtel Antsiranana i Guy Rivo Randrianarisoa
Farmasianina Mbola tena vitsy eto amintsika
Mbola tena tsy vitsy mihitsy ny farmasianina eto amintsika. Raha mahatratra 73 isa mantsy ireo hopitaly eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin’izao fotoana, dia ny 12 amin’izy ireo monja no misy farmasianina, antony manosika ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka hanome taratasy ireo olona vonona hiantsehatra manokana amin’ny fivarotana fanafody.
Faha-50 taonan’ny FJKM Lanonam-be any Antsiranana
Nizotra tamin’ny an-tsakany sy an-davany ny fanokafana ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fiangonana FJKM sy ny faha-200 taona nidiran’ny Misiona LMS,
Tompondaka eran-tanin’ny ady totohondry Tsy lasa any Allemagne ny delegasiona Malagasy
Mbola tsy lasa nihazo an’i Hambourg - Allemagne toerana hanatanterahana ny lalao fiadiana ny ho tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja “Boxe amateur” ny atleta Malagasy, Andrianarivelo Marco Jérôme, tokony hiatrika izany miaraka amin’ny delegasiona miaraka aminy izay ahitana olona 4.
Barea sy Angola any Luanda Hoezahana tantaraina mivantana amin’ny RNM
Nanambara ny tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny FMF na ny Federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra,
Hampiadiana sa hampihavanina ?
Rehefa manaraka tsara ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny, indrindra fa ny tontolo politika iainana amin’izao fotoana izao dia sarotra ny tsy
Kolonely Andry Rakotondrazaka Mbola tale jeneralin’ny ATT
Araka ny fanapahana noraisina teo anivon’ny filankevitry ny minisitra ny alakamisy lasa teo, dia nisy ny fanesorana sy fanendrena olona ambony eo anivon’ny minisiteran’ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro.
Fanafihana taksibrosy RN7 Voatosiky ny zandary ireo dahalo
Tsy mbola tapitra ny fanakanana sy fanafihana taksibrosy any amin’ny làlam-pirenena faha-7 mianatsimo iny.
Tsy fandriampahalemana Izay vao taitra ingahy Prefe
Mihamahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Hamoizana aina hatrany matetika, antony nanosika ny prefektioran’ny polisy eto Analamanga handray ny andraikiny ihany koa, miaraka amin’ny tafika sy ny zandary.
Ny tanora sy ny tsy fandriampahalemana Nafana ny adihevitra teny Antaninarenina
Tsy misy tanora afaka mandroso raha tsy misy fandriampahalemana. Io amin’ny ankapobeny no nambaran’ireo tanora tonga tetsy Antaninarenina nanaraka ilay adihevitra mikasika ny tanora sy ny tsy fandriampahalemana misy eto amintsika, nokarakarain’ny fikambanana Observatoire de la jeunesse omaly.
Efa tonga soa aman-tsara any Mahajanga avokoa ny ankamaroan’ireo delegasiona avy amin’ny faritra 22 eto
Madagasikara hiatrika ny Fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly nasionaly, ka maherin’ny 1400 eo ireo ankizy no hiatrika ny lalao.